Dhakhaatiirta Kalkaaliyayaasha Caafimaadka Columbus, Kooxda Dhakhaatiirta Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka ee OH
Kooxda Kalkaaliyaasha Caafimaadka
Xirfadlayaal Caafimaadka Haweenka
La kulan Dhakhaatiirtayada Kalkaalisooyinka ah
Khabiirada Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka Haweenka waxay maareeyaan daryeelka OB / GYN ee haweenka da 'kasta leh, iyagoo diirada saaraya fayoqabka, kahortaga cudurada iyo daaweynta cudurada yar yar. Waxay ku takhasusaan daryeelka uurka, qorsheynta qoyska, ciladaha caadada, caadada oo la joojiyo iyo baahiyaha kale ee haweenka.
Abby waa Dhakhtarka Kalkaaliye Caafimaad ee Haweenka ku takhasusay daryeelka Uurka, qorsheynta qoyska, xanuunada caadada, iyo imtixaanada sanadlaha ah. Waxay ka heshay shahaadada koowaad ee cilmiga sayniska jaamacada Capital University sanadkii 2002. Abby ka dib waxay ka shaqaysay kalkaalisada shaqada iyo bixinta ee Dayton, Ohio ilaa ay ku biirtay Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka iyada oo ah kalkaaliye kala soocid ah 2003. Kadib waxay heshay Master-keeda ee Caafimaadka Haweenka 2009 , oo bilaabay inuu u shaqeeyo sidii Kalkaaliye Caafimaad oo Shahaadaysan.
Abby wuxuu ku barbaaray Waynesville, Ohio, wuxuuna hada degan yahay Clintonville ninkeeda, Scott, iyo gabdhaheeda, Jillian, Bridget, iyo Paige.
Christina waxay ka qalin jabisay jaamacada Miami oo ay ku qaadatay shahaadada koowaad ee kalkaalinta caafimaadka sanadkii 2009. Waxay ka shaqeysay foosha iyo dhalida mudo 5 sano ah Jacaylka ay u qabto caafimaadka haweenka ayaa u horseeda iyada inay ku sii wadato Master-keeda kalkaalinta Jaamacadda Ohio State. Waxay ka qalin jabisay iyadoo ah kalkaaliye caafimaad oo kalkaaliye caafimaad ah sanadkii 2013. Kalkaaliye caafimaad kalkaaliye caafimaad Christina waxay u keentay dhaqankan asalka daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ee shakhsiyaadka noloshooda oo dhan.
Christina waxay kula nooshahay Westerville ninkeeda Lee, gabdhahooda Reese iyo Reagan, iyo labadooda ey.
Xirfadlayaasheena kalkaalisooyinka (NP) waxay bixiyaan daryeelka uurka, qorsheynta qoyska, daaweynta xaaladaha daran iyo kuwa daba dheeraada, iyo noocyada kale ee adeegyada OB / GYN.